I-Vanilla ushizi inika ugxuma olubukhali ushukela enganeni: ukuthi wenzeni? > Imibuzo
Izinhlamvu zokudla kwasekuseni noshukela ezinganeni: kwenzekani ngoshukela wegazi
Njengoba ngikuqonda, usho ukuthi ushukela we-curd ushizi onempilo (kungaba ukhazimulile, noma ushizi nje omnandi we-curd). Ngobungako be-insulin: impela, singeza i-insulin emfushane, sibala i-XE futhi sazi ukuqina kwe-carbohydrate yethu. Manje, ngokusobala, isidingo sengane se-insulin siyakhula (ungabala i-carbohydrate coeffnty).
Kepha ingozi yama-cheesecake amnandi ukuthi aqukethe ama-carbohydrate asheshayo - noma ngabe yikuphi, i-cheesecake izonikeza ukugxila kushukela wegazi, okungekho ngokuphelele kushukela.
Ngakho-ke, kungcono ukususa imikhiqizo enjalo ekudleni. Ungenza ushizi we-vanilla, i-casserole ngokwakho, ungene esikhundleni sikashukela nge-stevia noma i-erythrol (ama-sweeteners aphephile). Lawa maswidi enziwe ekhaya ngeke aluphakamise ushukela wakho wegazi.
Ingakanani i-carbohydrate ingane engaba nayo. Ama-carbohydrate alula: uhlu lwamagama kashukela
Ngabe izingane zingathola malini i-carbohydrate? Futhi ushukela ongakanani ongeke ulimaze impilo yabo? Le mibuzo yabuzwa ababhali bencwadi ethi “Ungayilumula kanjani ingane kusuka kumaswidi?” Futhi yathuthukisa isu lonke lokushintsha ukondleka kwezingane. Ngesikhathi sokugcina sitshele ukuthi isidlo sasekuseni esinempilo kufanele sibe yini nokuthi ungayeka kanjani ukudla ukudla okusanhlamvu okusanhlamvu ekuseni. Namuhla - mayelana nokuthi ama-carbohydrate alula futhi ayinkimbinkimbi ahluka kanjani nokuthi kwenzekani enganeni ngemuva kwesidlo sasekuseni esimnandi.
Ama-carbohydrate alula futhi ayinkimbinkimbi: kukuphi ukudla?
Ama-carbohydrate - umthombo oyisisekelo wamandla - unikeza umzimba ushukela. Ama-carbohydrate alula futhi ayinkimbinkimbi. Ama-carbohydrate alula - ngokwesibonelo, kusinkwa esimhlophe - amuncwa kalula futhi asheshe aphakamise amazinga kashukela egazini. Ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi - ikakhulukazi uma etholakala ephelele, okusanhlamvu okungachaziwe: i-oats, ukolweni ngokuphelele, i-bulgur ne-quinoa - kunzima kakhulu ukuwohloka emzimbeni.
Ngokungafani nemikhiqizo kafulawa ecwengekile equkethe kuphela i-endosperm, imikhiqizo ephelele yokusanhlamvu iqukethe i-germ, i-bran ne-endosperm, ngakho-ke akulula kangako ukuyigaya. Lapho ingane idla ukudla okusanhlamvu okuphelele, izakhi zomzimba zingena emzimbeni kancane, kancane kancane, ngoba okokuqala kufanele usebenze ekwehliseni ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi enziwe ngamangqamuzana kashukela. Okusanhlamvu okucolisisiwe kudedela ama-carbohydrate emgodini wegazi emfuleni owodwa onamandla, okubangela ukugxuma okubukhali kushukela wegazi, sengathi ingane yakho igcwele ushukela omsulwa.
Likhuphuka kangakanani ushukela wegazi ngemuva kokudla lo mkhiqizo okuthiwa yi-glycemic index (GI). Ukudla okuphezulu kwe-GI kufaka u-ayisikhilimu, isoda, izithelo ezomisiwe, okusanhlamvu okucwengekile kufana nefulawa emhlophe nama-corn flakes. Imikhiqizo enenkomba ye-glycemic ephansi yimifino, okusanhlamvu okuphelele, ubisi, amantongomane.
Ama-carbohydrate asanda kuba "villain" wemfashini, ilitshe labezempilo. Muva nje, sithole umfutho ekudleni okune-carb ephansi: besiqiniseka ukuthi ama-carbohydrate ayingozi empilweni futhi abangela ukukhuluphala. Kuyaziwa manje ukuthi ama-carbohydrate awalungile kangako, kepha zinhlobo ezithile kuphela futhi uma kuhlukunyezwa.
Ama-carbohydrate ekudleni kwezingane: imithetho emi-4
Izingane kufanele zithole amaphesenti angama-50-60 awo wonke amakhalori njengama-carbohydrate.
Ama-carbohydrate ayinkimbinkimbi kufanele abe yingxenye yokudla uma evela emasimini wonke kunokudla okuhlaziywe.
Izingane kufanele zidle imithombo enempilo yama-carbohydrate alula; ushukela olula ungatholakala ekudleni okuningi okunempilo, okufana nobisi (i-lactose), izithelo (i-fructose), nezinhlamvu (ushukela).
Khawulela ukudla okunoshukela (okungeziwe) noshukela ocolisisiwe (kusetshenzwe), funda uhlu lwezithako ngokucophelela.
Amagama ushukela angawafihla ngaphansi:
ushukela we-icing noma ushukela we-confectionery,
ujusi wezithelo ugxile
isiraphu yommbila ophezulu,
umpe (isb. peach kanye neparele),
ushukela obunjiwe (omhlophe).
Ushukela wegazi: kuncike kanjani emsobeni
Ase sibuke laba bafana lababili. UBen uqale usuku ngamaqanda aqhekeziwe, ubhontshisi wokusanhlamvu okuphelele nopelepisi. Ukusa kukaJohn kwaqala ngengilazi yejusi ne-toast kakolweni, ayidla ngenkathi egibela ebhasini. Umzimba kaBen kumele ucubungule u-4 g (ithisipuni elilodwa) ushukela olula, kuyilapho umzimba kaJohn kuyodingeka ukuthi ugaye ugaye izithako ezinoshukela ongu-40 g (amathisipuni ayishumi) kashukela.
Ngenxa yemicu yokusanhlamvu okuphelele namaprotheni aqukethe amaqanda, umzimba kaBen uzothatha kancane ushukela ekudleni. Ushukela uzoqhubeka ume ngaphandle ukondla umfana ngamandla, unikeze umuzwa wokugcwala futhi ukuvumela ukuba ubambe kuze kube ukudla okulula noma ukudla.
Njengoba ibhulakufesi likaJohn laliphansi ku-fiber ne-protein, lonke lolu ushukela lumuncwa ngokushesha kanye namazinga kashukela egazini. Ama-pancreas azabalaza ukubhekana nomthwalo, kepha awukwazi ukucubungula inani elinoshukela endaweni eyodwa. Lapho-ke ushukela wegazi uzobuyela ngokushesha ezingeni lawo lasekuqaleni, futhi, ukungabi nesikhathi sokudla kwasekuseni, uJohn uzophinde alambe futhi. Ngaphezu kwalokho, amazinga kashukela angawa ngisho nangaphansi okujwayelekile, abangele isimo se-hypoglycemia (ushukela wegazi ophansi).
Ngandlela thile, ingane izofuna umthamo olandelayo kashukela. Uma udla ngale ndlela nsuku zonke, kulula ukudala ukungalingani kushukela wegazi ngenxa yomthwalo ngokweqile kuma-pancreas: kuzoba noshukela omningi kakhulu (ushukela) noma omncane kakhulu (hypoglycemia).
Uma ucabanga ukuthi izingane zakho zinenkinga ngamazinga kashukela, hlola izinkomba ezisohlwini olungezansi futhi uqiniseke ukuthi wabelana ngezinkinga zakho nodokotela wakho wezingane ukuthola ezinye izimbangela ezinkulu ezingadala lezi zimpawu.
Ezinye izinkomba zoshukela omncane wegazi (i-hypoglycemia esolwayo):
izinhlungu ezilambile / ubuhlungu besisu / indlala enkulu,
ukuthuthumela noma ukuthuthumela
ukukhubazeka kokufunda nokuziphatha,
umbala onsundu ophuzi,
ezimweni ezibucayi, ukulahleka kokuqwashisa kanye nokugunda.
Ezinye izinkomba zoshukela ophezulu wegazi (ushukela osolwayo):
umbala omnyama velvety wentamo nowesikhumba,
ukuphulukisa izilonda kancane
ukutheleleka okwenzeka njalo